Tydị Infographic layout iji gbaa gị ume! | Martech Zone
Tydị Infographic layout iji gbaa gị ume!
Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị abụrụla ezigbo ihe enyemaka maka ndị na - agụ akwụkwọ iji chọta ma mụta site na infographics. Infographics bụ, otu n’ime ngwa ọrụ kachasị mma nke azụmaahịa ugbu a n’ihi na ha nwere ọtụtụ uru:
A na-ekekọrịta ha n'ụzọ dị mfe, na -eme ihe kacha mma elekọta mmadụ media - ịkekọrịta ọdịnaya gị ma gụọ na netwọk dị mkpa.
A na-ebipụta ha mfe, na -eme ihe kacha mma nyocha ọchụchọ - na-emepụta backlinks bara ọgaranya, dị mkpa nke na-eme ka ogo gị dị elu.
Ha bụ mfe iwesa, na-ewere isiokwu ndị dị mgbagwoju anya ma na-eme ka ọ dị mfe igwu ndị na-agụ ya. Ọ bụ ezie na vidiyo nwere ike ịdị mfe, ọ na-esiri anyị ike ịmịpụta (maka ugbu a).
E nwere ụfọdụ ihe onwunwe ndị na-etinye anyị na ịkekọrịta ihe ọmụma ha. Fọdụ dị mma nke ukwuu nke stats puked n'ime mara mma eserese ma ọ bụ abụọ. Ọ bụ ezie na na teknụzụ nwere ike ịbụ ihe Ozi, Echeghị m na ọ bara uru ịkekọrịta ka anyị ghara. Ihe omuma ihe omuma ndi ozo na-eweputa agbanwe agbanwe, ihe omuma zuru oke nke na aru oru di egwu na ikwuputa ebumnuche ha. Brian Downard bụ otu n'ime ihe ndị ahụ ma anyị nwere oke ịhụnanya ịkekọrịta ọrụ niile ọ na-arụpụta. N'ihi nke a, Brian ruru na anyị kpebiri iwepụta akwụkwọ ozi iji nyere ndị na-ere ahịa aka iwepụta infographics ka mma.
Brian mere ihe ngosi a dị ịtụnanya, 16 Atụmatụ atụmatụ Infographic graphic nwere ike idetuo na anyị nyere ụfọdụ echiche na. Ọgwụgwụ nsonaazụ dị oke mma ma kwesiri ịba uru ka ị na-aga n'ihu na ọrụ ntinye akwụkwọ ọzọ gị. Ihe omuma ahu na-agbawa ihe omuma o bula n'ime akuko gi - mepee ya na isi okwu na okwu mmeghe, wee nye isi esemokwu, tinyere nkwubi okwu (nke na-enwekarị oku na-eme). Ihe omuma ihe na-ekpughe otutu uzo nke iji anya nke ihe omuma gi - tinyere:
General - agwakọta na dakọtara layouts na chaatị dị iche iche.
Nzọụkwụ site na nkwụsị - nye ndị na - agụ akwụkwọ gị otu ị ga - esi - ma ọ bụ depụta usoro gị.
Data chụpụrụ - jiri anya nke uche hụ data ọ bụla nke bụ igodo iji gosipụta akụkọ gị.
usoro iheomume - gosipụta usoro ihe omume n'usoro oge.
Ogologo oku - nyere ndi mmadu aka ichota ihe nke aka ha site na usoro mkpebi na uzo di nkpa.
vesos - nye ntanye isi n’etiti ihe abụọ.
Akụkọ nke - jee ije n’agụgụ akụkọ banyere gị
Roadmap - gosi otu iyi nke ihe omuma n’usoro ma rute ebe ozo.
[igbe ụdị = ”nbudata” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ”90%”]pịa ebe a iji nweta Brian n'efu 20-isi infographic e kere eke PDF swipe faịlụ na infographic “teardown” video. [/ box]
Nke a bụ ihe ịtụnanya infographic:
Tags: Brian Downarddata-chụpụrụ infographicinfochart infodata infographicinfographic imewenhazi ọkwaụdị infographicihe ndozi ihe ntanetịinfographic okporo ụzọnzọụkwụ-site-zoo infographicakụkọ infographicusoro iheomumena infographic
Inbound Brew: Gbaa ahia ahia ahia gi site na WordPress